C/risaaq Cumar oo si kulul u beeniyay warar mudooyinkii dambe si aad ah loo hadal-haayay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/risaaq Cumar oo si kulul u beeniyay warar mudooyinkii dambe si aad ah loo hadal-haayay (AKHRISO)
Wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/risaaq Cumar Maxamed ayaa si kulul u beeniyay hadal mudooyinkii dambe si aad ah loo hadal-haayay, kaas oo ahaa inuu u sharaxan yahay xilka madaxweynaha maamulka gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Wasiirka oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in hadalkaasi uu yahay mid been abuur ah, islamarkaana uusan ahayn musharax haatan u taagan xilka madaxweynaha maamulka gobalada Hiiraan iyo Sh/dhexe, isagoona dhinaca kale beeniyay warar ay baahiyeen warbaahinta qaarkood oo ku saabsanaa inuu xilka wasiirnimo iska casilayo, kadibne isku sharaxayo xilka madaxweynaha maamulka cusub ee labadaasi gobol.
“Waa dacaayad, waana been aan sal iyo raad toona lahayn inaan is casilayo, mana ahi musharax u taagan maamulka loo dhisayo gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe..” Sidaasi waxaa yiri wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/risaaq Cumar Maxamed.
Dhinaca kale, wasiirka ayaa warbaahinta qaarkood ugu baaqay in wararka ay gudbinayaan si fiican isaga hubiyaan, islamarkaana ay noqdaan kuwa xaqiiqada u gudbiya bulshada balse aysan noqon kuwa warar aan jirin iska gudbiya.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/risaaq Cumar Maxamed ayaa imaanaya xilli shirka Jowhar ee dhawaan dib loo furay ay soo baxayaan musharaxiin badna oo u taagan xilka madaxweynaha maamulka gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe, inkastoo ilaa iyo hataan shirkaasi weli la isku mari la’ yahay dhinaca qeybsiga xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.